Tombontsoa 5 amin'ny fanampiana sary amin'ny tranokalano | Martech Zone
Tombony 5 amin'ny fampidirana infographic amin'ny tranokalanao
Talata, May 14, 2013 Alakamisy, Aprily 27, 2017 Jayson DeMers
Notarihin'ny sary sy horonan-tsary ny olona, ​​ary momba ny fotoana dia nahazo ny fanajana sahaza azy ireo ny sary. Mihoatra noho ny sary mahafinaritra fotsiny izy ireo; manana izay ilaina izy ireo raha te ho lasa viral ary koa manatsara ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika, ny fambara sosialy, ary ny haino aman-jery. Mametaka totohondry be dia be amin'ny sary ny infografika ary azo ampiasaina hanehoana hevitra iray ary hamatotra tsara ny zava-misy. Ny tena mampiroborobo ny lanjan'izy ireo dia ny fizarana azy ireo mora foana amin'ny tranonkala media sosialy, manome azy ireo ny fahafaha-mivoatra.
Ny orinasan-tserasera rehetra dia afaka mahazo tombony amin'ny fampiasana infografika, saingy raha tsy vita tsara izany. Tahaka ny atiny avo lenta ihany koa, ny infografika dia mila manana kalitao tsara indrindra sy mahasoa ny mpijery.
Fifandraisana tsara kokoa - Samy manana ny fomba fifandraisany ny tsirairay, ary olona vitsivitsy (indrindra ny Arivotaona) tarihin'ny sary. Ny fifandraisana tsara kokoa dia tanterahina amin'ny infografika satria ny fampahalalana dia apetraka amin'ny sary azo zahana, mora takarina fa tsy bilaogy na lahatsoratra. Izany dia manintona ireo olona mianatra maso, manome ny infografika fiantsoana malalaka kokoa sy fahafaham-po.
Fanatsarana ny fivezivezena amin'ny tranokala - Rehefa navoaka ny infographic misy anao ary manomboka mandeha mamaky ny vanim-potoana fampiroboroboana dia hisarika ny sain'ny mpanonta hafa. Rehefa manondro an'io ny mpanonta hafa dia hahita fifamoivoizana amin'ny referral avy amin'ireo mpanonta ireo ianao. Infografika koa dia mitondra tombony SEO izay manampy amin'ny fampitomboana ny fifamoivoizana, izay resahina etsy ambany.
Laharana milina fikarohana nohatsaraina - Ny infografika dia manatsara ny laharan'ny milina fikarohana amin'ny alàlan'ny fisarihana rohy miditra. Rehefa navoaka ny infographic lehibe dia hisarika rohy izy io rehefa zaraina amin'ny sehatra media sosialy ary tafiditra ao anaty lahatsoratr'ireo mpanonta hafa. Ho setrin'izany, rehefa navoaka ireo lahatsoratra ireo, dia hahasarika ny hevitry ny mpamaky sy ny fizarana media sosialy, vokatr'izany famantarana ara-tsosialy izay misy akony lehibe amin'ny filaharan'ny motera fikarohana.
Fanatrarana mpihaino maharitra - Rehefa navoaka indray ny loharanom-pahalalana nataonao tao anatin'ireo andro, herinandro ary volana taorian'ny namoahana azy dia hisarika ny sain'ireo mpihaino vaovao misy ny tsenanao kendrena ianao. Ity dia tsy vitan'ny hoe hampiakatra ny fivezivezena kendrena mankany amin'ny tranonkalanao, izay miteraka taham-panovana avo kokoa, fa hanampy amin'ny fametahana ireo fantsona media sosialy miaraka amin'ireo mpanjifa mety ho avy.
Fanatsarana sy fahatokisana ny marika - Rehefa navoaka indray ny infographic-nao, ny marikao dia hampifandraisina amin'ny fanatrarana bebe kokoa an'ny mpanonta, fananganana fahatokisana marika tsy amin'ny mpanjifanao mety ihany, fa koa amin'ny motera fikarohana (manatsara kokoa ny laharan'ny motera fikarohana sy ny fifamoivoizana an-tranonkala) Ny haino aman-jery havoakan'ny infographic-nao dia hampiorina ity vokatra ity ihany koa. Rehefa hitan'ny mpanjifa sy ny mpanjifa misy ny infografikao navoaka tamina tranonkala azo itokisana sy manam-pahefana natokisany, dia hahazo ny fahatokiany sy ny fitokisany ianao.
Infografika dia a fitaovana matanjaka ao amin'ny arsenalanao marketing amin'ny Internet. Aza hadino ny mifantoka amin'ny famokarana infografika avo lenta fotsiny mba tsy hampihena ny marikao, ary manana tetika marketing ho an'ny mpamono olona ianao.
Tags: tantaran'ny infografikaMarketing Infographicsmarketing an-tserasera
Kaleio: Tambajotra sosialy ho an'ny mpiasa manerantany
Maninona no tsy mandeha ny RFP tranonkala